ယနေ့ခေတ် ကလေးတွေ သိပ်မသိတော့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ အမူအကျင့်များ – BaHuTuTa
ယနေ့ခေတ် ကလေးတွေ သိပ်မသိတော့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ အမူအကျင့်များ
November 7, 2020 admin History, Knowledge, Lifestyle, National 0
တံခါးပိတ်တဲ့အခါ “ဂျိန်း” ခနဲ မြည်အောင်ပိတ်ကြတယ်။ ရေခဲသေတ္တာပိတ်တာကို “ဗိန်း” ခနဲ မြည်အောင် ပိတ်ကြတယ်။ ထမင်းပေါင်းအိုး ပိတ်တာကိုလည်း “ဂျောင်း” ခနဲမြည်အောင် ပိတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို အမူအကျင့်တွေဟာ အထိန်းအမ မရှိ၊ သတိမထားတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ အမူအကျင့်ဖြစ်တယ်။
အိုးခွက်ပန်းကန်ဆေးတာ၊ ဟင်းရည်သောက်ပြီး ဇွန်းကိုပြန်ချတာတွေလည်း အသံမမြည်အောင် သတိထားရတယ်။ ဟင်းရည်သောက်တဲ့အခါမှာ သုရုသုရုအသံ မမြည်အောင် သောက်ရတယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်း စပုစပုအသံ မမြည်အောင် စားရတယ်။ မြည်ရင် အသံထွက်ရင် သူတပါးအထင်အမြင်သေးခံရတတ်တယ်။
စားပြီး လက်ဆေးတဲ့အခါ၊ ပလုတ်ကျင်းတဲ့အခါမှာ အသံမမြည်အောင်၊ နှလုံးပျို့စရာ၊ ရွံစရာ၊ မသတီစရာမဖြစ်အောင် ဆေးရကျင်းရတယ်။
ပြီးတော့ လူကြီးမိဘ ဆရာသမာတွေရဲ့ အိပ်ရာနေရာအပေါ်မှာ တက်မအိပ်ရဘူး။ ထိုင်ခုံ အခင်းတွေအပေါ် တက်မထိုင်ရဘူး။ အိပ်ယာခေါင်းရင်းပိုင်းကို သွားတဲ့အခါ လေးဘက်တွားသွားရတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ခြေသံမကြားအောင် လျှောက်တတ်ရတယ်။ ဖိနပ်စီးသွားရင်လည်း “ရှပ်ရှပ်” အသံမြည်အောင် ရှပ်တိုက်မသွားရဘူး။
လှည်းတဲ့ကျင်းတဲ့အခါမှာလည်း သတိထားရတယ်။ ဟင်းအိုးဟင်းခွက်တွေထဲ ဖုန်မဝင်အောင် အရင်ဖုံးဖိပြီး လှည့်ကျင်းရတယ်။ မြေကြီးအပေါ် လှည့်ကျင့်းတခါ လူသွားလူလာရှိရင် ရပ်တန့်ပေးရတယ်။ လက်ဆေးရေစတဲ့ ရေညစ်ရေဆိုးသွန်တဲ့အခါ အရပ်လေးပါး ဥပစာကို ကြည့်သွန်ရတယ်။
လူကြီးမိဘ ဆရာသမားတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ၊ လျှောက်တင်တဲ့အခါမှာလည်း “ဘူး၊ တယ်” နဲ့ ထည့်ပြီး မပြောရဘူး။ ဥပမာ “မဟုတ်ဘူးဘုရား” လို့ မလျှောက်ရ။ “မဟုတ်ပါဘုရား” လို့ လျှောက်ရတယ်။ “ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား၊ မှန်ပါတယ်ဘုရား” လို့ မလျှောက်ရ၊ “ဟုတ်ပါဘုရား၊ မှန်ပါဘုရား” လို့ လျှောက်ရတယ်။ “ပါ” နဲ့ လျှောက်ရ၊ ပြောရတယ်။
ရဟန်းသာမဏေတွေ ကျင့်သုံးရတဲ့ ဝိနည်းသိက္ခာအချို့ကို လူတွေလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်။ အပြောဆို၊ အသွားအလာ၊ အနေအထိုင်၊ အမူအကျင့်တွေ အထက်တန်းကျဖို့၊ အဆင့်အတန်းမြင့်ဖို့အရာ အသေးအမွှားကလေးကအစ သတိပြုရတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ် ကလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ မြင်ရတာ သိပ်မကောင်းဘူး။ လူကြီးမိဘများက ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တော်ရိလျှော်ရိနေရင် ကလေးများတွေကလည်း ဒီအတိုင်းသာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်းဆိုတဲ့အတိုင်း လက်ဦးဆရာများဖြစ်တဲ့ လူကြီးမိဘများက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် နည်းလမ်းကျနအောင် သွန်သင်ပြသဖို့လိုတယ်။
အိုင်းလိုင်နာ (EYE LINER) ကြောင့်ဘာတွေထိခိုက်နိုင်သလဲ ? ? ?
စက်ဆွဲစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကို ပျော့ပျောင်းစေမယ့်နည်းလမ်း